Resaka fitiavan-tanindrazana – Malag@sy Miray
Nivezivezy be tato anatin’ny fotoana fohy ny resaka fitadiavam-bola amin’ny alalan’ny pôlitika. Voalaza mantsy fa raha te ho tafita ara-bola haingana dia tsy misy tsara ohatra ny miditra amin’ny fitondrana na manaraka mpanohitra matanjaka mba ahazoana misimisy.
Ankoatra ireo karama voafaritra mazava ho voaray araka izay anjara lahasa na toerana miy dia eo ihany koa ireo fanamorana ataon’ny sasany amin’ny afera somary maloto na fomba fanao voararan’ny lalàna (kolikoly, « trafic d’influence », « abus de biens sociaux », « délit d’initié », sns) Nampahoraka ny adihevitry ny sarambaben’ny vahoaka ny fahazoan’ny olona vitsivitsy miliara na vola tsy hita pesipesenina noho ny fanaovana asa mikasika mivantana na ankolaka io resaka politika io. Nampi-loa-bava ny maro izany olona ambony nividy fiara mahazaka lalandratsy amin’ny vidiny mety ahafahana mamorona asa ho an’ny tsy manana. Torak’izany koa ireo izay nahatsangana trano vaventy tao anatin’ny fotoana fohy kanefa ireo vahoaka tsy mandady harona miady isan’andro amin’ny vidim-piainana miakatra.
Vahotra ny vava, sadaikatra… lasa fitadiavana ny fiadian-tseza. Very ny soatoavin’ny fitantanana pôlitika sy ny hasin’ny fitiavan-tanindrazana. Maty ho an’ny tanindrazana… adala izay manao izany ho ireo mpanao pôlitika malazalaza amin’izao fotoana, aleo velona dia mihinana toy izay mijoro amin’ny tena hevitra ka ho very fihinanana: mampalahelo!
Mampalahelo dia mampalahelo tokoa ilay toe-tsaina ary manimba ireo olom-baovao vao hirotsaka amin’io sehatra politika io satria dia izay tokoa izany moa ilay fomba. Dia na ny zanaka aman-jafy izany dia efa izay ihany koa no ho ataony satria izay no ohatra hitany. Ary hitany fa tsara izany ka tsy hiova amin’izay izy ireo.
Inona ary izany izao no tena atao hoe fitiavan-tanindrazana? Raha ireo politisianina ireo moa izany no atao hoe : »tsy omena fiara sy trano ary karama ianareo ho fitiavana ity Madagasikara soa ity fa omena kosa izay vary sy laoka sahaza anareo isan’andro » dia hisy hanaiky ve izany? Hisy ve na dia iray aza ho sahy hiteny hoe tena tiako ity fireneko sy ny vahoaka ao aminy ity ka hanao asa maimaim-poana (bénévolat) aho ho fampivoarana sy famonjena azy? Asa re…
Mbola ny lafiny politika izay ampahany voalohany amin’ity resaka fitiavan-tanindrazana ity, mbola ho avy manaraka ny resaka sosialy sy kolotoraly ay toe-karena.
22 avril 2011 à 2:06
Tena mankasitra indrindra amin’ny fampatsiahivina nataonao.
Mila entanina mihitsy ny ankizy amin’izany atao hoe « fitiavan-Tanindrazana » izany. Io dia mahafono zavara be : fandalàna ny fahadiovan’ny tanàna, tsy fanaovana kolikoly, …